‘सत्ता होइन व्यवस्था जोगाउनु महत्वपूर्ण हो, व्यवस्था बचे सत्ता पटक पटक आउँछ’ « Harekpal
‘सत्ता होइन व्यवस्था जोगाउनु महत्वपूर्ण हो, व्यवस्था बचे सत्ता पटक पटक आउँछ’
रामचन्द्र पाैडेल March 20, 2021
आफ्नौ मौलिकता नबुझेपछि दुख हुन्छ । अहिले कतै कांग्रेसले आफ्नो मौलिकता विर्सेर दुख पाएको हो कि भन्ने मलाई लागेको छ ।
कांग्रेसले क्रान्तिको सुरुवात श्रमको सम्मान गर्ने आन्दोलन थालेर भएको थियो । विराटनगरको मजदुर आन्दोलन होस किन पहाडमा ब्राम्हणले हलो जोत्न सुरु गरेको होस, यी दुवै श्रमको सम्मान गर्ने आन्दोलन हुन् ।
यो सन्देशलाई र यो मौलिकतालाई कांग्रेसले अहिले भुलेर दुख पाएको हो कि जस्तो लागेको छ । आफ्नो पहिचानलाई बिर्सेर हामी भड्किरहेका छौ । २०१५ सालमा आफ्ना मौलिकता अगाडि सारेर दुईतिहाइ मत ल्याएको थियो । तर जति पछि भयो त्यती आफ्ना एजेण्डालाई कांग्रेसको पहिचानलाई भुल्न लागेकाले कमजोर भएको हो । कांग्रेसले अब एकपटक आत्मासमिक्षा गर्न जरुरी छ ।
कांग्रेस समान्तवादका विरुद्ध, शोषणका विरुद्धमा जन्म भएको हो । ठालुतन्त्रका विरुद्धमा कांग्रेस जन्मेको हो । निमुखा अन्यायमा परेका जनताको आवाज हो भनेर कांग्रेसको जन्म भएको थियो । यो मौलिकता धानेर राख्न सकेको भए हामीसंग प्रतिष्पर्धामा आउन नै सक्दैनथे । अहिले कम्युनिष्ट बढेका हैनन् कांग्रेस घटेको हो । हामीले हाम्रा एजेण्डा छोड्दै जाने कम्युनिष्टहरुले समात्दै जाने भयो । अनि हामी घट्दै गयौ ।
कांग्रेस मजदुरको पार्टी श्रमिकको साथी भन्ने नारालाई व्यवहारमा उत्रार्न सकेको भए कांग्रेस घट्दैनथ्यो । हामीले नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न सकेको भए अहिले यो अवस्था आउदैनथ्यो । यसको मतलब हामीले समाजवादलाई वास्तविक रुपमा उतार्ने प्रयास गरेनौ । सत्तामा गएका बेलामा हामीले समाजवादलाई उतार्ने प्रयास गर्न सकेनौ । नीति निर्माणका बेलामा ध्याने दिने हो भने कांग्रेसलाई दुख पर्दैन् ।
अहिले सवैभन्दा ठूलो कुरा भनेको हामी व्यवस्थाका लागि ७० वर्ष लड्यौ । अहिले हामीले त्यो व्यवस्था जोगाउने दायित्व र जिम्मेवारी छ । गिरिजाबाबुले प्रतिनीधिसभा पुनःस्थापना भन्दा अरु विकल्प देख्नुभएको थिएन । यही मात्रै हो जनताको हातमा अधिकार जनताको हातमा सत्ता आउन जनताको सत्ता आउनुपर्छ भन्नेमा गिरिजाबाबु हुनुभयो । संसद पुनःस्थापना भएपछि सार्थक बनाउने काममा कांग्रेसले अग्रसरता लियो । त्यही प्रतिनीधिसभाबाट आज राजा हटायो । समावेशी लोकतन्त्र र संघीय गणतन्त्रको जग बसालेको हो ।
अहिले प्रतिनीधिसभा पुनस्थपनाका बारेमा मतान्तर भयो । केहि पुनःस्थापनाको पक्षमा वकालत गरियो । केहि साथीहरुले चुनाव नै महत्वपुर्ण हो । चुनाव भन्ने साथीहरुले अदालतका बारेमा बोल्नुहुँदै भनेर भन्नुभयो । तपाईहरुले दुईवटा कुरा आए भन्नुभयो । हो दुईवटा कुरा आएपछि कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले जजमेन्ट गर्नुपर्यो । दुईवटा विषय आएपछि जजमेन्ट कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले कुन विचार ठिक थियो भनेर गर्नुपर्यो ।
अदालतले पुर्नस्थापना गरिदिएपछि पनि चुनाव भन्ने सुनिन थालेको छ । अहिले संसदीय वव्यवस्था असफल बनाउने कोशिश भइरहेका छ । संसदीय व्यवस्था हाम्रो आर्दश हो । कम्युनिष्ट र दक्षिणपन्थीहरुले संसदीय व्यवस्थाका विरुद्धमा छन् । दक्षिणपन्थीहरु संसदीय व्यवस्थालाई विदेशीको व्यवस्था भन्छन, कम्युनिष्टहरु संसदीय प्रणालीलाई वुर्जवा व्यवस्था भन्छन् । संसदीय प्रणाली त कांग्रेसको आर्दश हो ।
अहिले यो संसद र संसदीय प्रणालीलाई बचाएर जानुपर्छ । अहिलेको प्रहार भनेको संसदीय व्यवस्थामाथि प्रहार भइरहदा यसैलाई मलजल गर्ने कि निस्तेज बनाउन लाग्ने हो । अहिले पनि चुनावको कुरा गर्ने हो । कम्युनिष्टहरु दुईतिन तिर भएका बेलामा यहि संसदबाट विकल्प दिनुपर्ने हो । संसदमा प्रहार गर्यो । यो संविधानलाई नै फाल्ने कोशीश गर्नेलाई पाखा लगाउने प्रयासमा कांग्रेस लाग्नुपर्छ कि पर्दैन् । लोकतन्त्र बचाउने काममा कांग्रेस लाग्नुपर्ने हो कि होइन ?
अहिले पनि हाम्रा साथीहरु चुनाव चुनाव नै भन्दै हुनुहुन्छ । संसद विघटन गर्ने कुनै अधिकार नै छैन् । फेरि किन मंसिरमा चुनाव भनिदैछ । हामीले अहिले चुनाव हैन यही संसदलाई उपयोग गरेर यो व्यवस्था जोगाउने हो । अदालतको फैसलाले फेरि पाँच वर्ष नपुगी संसद फाल्न दिदैन् । अनि फेरि किन मंसिरमा वा फागुनमा चुनाव भन्दै हिडेका छौ हामी नै । यो व्यवस्था जनताको लामो संघर्षबाट आएको हो । यो व्यवस्थालाई कसैले हल्लाउन सक्दैन भने कांग्रेसले प्रमाणीत गर्नपर्छ । कांग्रेसलाई अधिनायकवाद र निरकुंशता तर्फ जान नदिने यही संसदीय प्रणाली र संविधानको बाटोबाट मुलुकलाई हिडाउने कोशिशमा कांग्रेस लाग्नुपर्छ ।
संविधान नै फाल्ने कोशिश गर्ने संसद नै फाल्न फेरि पनि मैमत्ता हुने केपी ओलीको विकल्प खोज्नका लागि कांग्रेस अगाडि आउनुपर्छ । कांग्रेस मौन बस्ने बेला होइन । अहिले हामी निर्णायक छैनौ भनेर बस्ने हो कि निर्णायक बन्ने कोशिश गर्ने हो ? संकटको बेलामा खरो उत्रने कोशीश गरे मात्रै जनताले भरोसा गर्नेछन् । कांग्रेसले यस्तो अलमल गर्न सुहाउदैन् । सत्तालाई भन्दा ब्यवस्थालाई महत्व दिउ । व्यवस्था बच्यो भने सत्ता पटक पटक आउछ । अहिले कांग्रेसले संसद पुनःस्थापना भएपछि व्यवस्था बचेको छ । तर यो व्यवस्थालाई विकृत बनाएर बदनाम गराउन लागेका छन् । हामीले जोगाउनुपर्छ ।
संविधान बच्यो भने मजदुर किसान, महिला दलित जनजाती सवैका अधिकार बच्दछन् । यो संसद जोगिएन भने यो व्यवस्था पनि रहदैन् । यो व्यवस्था माथि प्रहार भइरहेदा हाम्रा साथीहरु पनि जानेर हो वा नजानेर हो । कांग्रेसले संकटका बेलामा नेतृत्व दिनसक्नुपर्छ । गिरिजाबाबुले संकटका बेलामा मुलुकलाई नेतृत्व दिनुभयो । हरेक संकटको घडिमा कांग्रेसले नेतृत्व दिएको छ । अहिले पनि कांग्रेसले नेतृत्व गर्न अगाडि सर्नुपर्छ । अहिले अलमलमा कांग्रेसलाई सुहाउदैन् ।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले काठमाडौंमा नेपाली राजनीतिका शिखर पुरुष गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ११ औं स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ।